Naafada | Radio Himilo
Home / Naafada
Ahmed Haaddi November 17, 2021
Ahmed Haaddi November 15, 2021
Sadia Nour November 25, 2020
Himilo – 32-jir ku nool waqoogi-galbeed Shiinaha ayaa soo jiitay indhaha isticmaalayaasha baraha bulshada, kaddiib markii uu jaray dhul gaaraya 2000km isaga oo adeegsanaya baaskiil. Sheekada cajiibka ah ayaase ah in Jing Hong-oo mid ka mida lugihiisa ku waayay shil ...
Sadia Nour November 23, 2020
Himilo – Maxamed Ikram oo u dhashay Pakistaan waxa uu ka dhabeeyay riyadii uu mudada ku taamayay, inkastoo uu gacmo la’aanta ku dhashay haddana waxa uu ciyaaraa kubadda Miiska. Waqtigiisii dhallaannimo waxa uu kusoo qaatay daawashada ciyaartaasi, isaga oo ka ...
Samafale shaqaaleysiiya dadka naadafada ka ah maqalka
Sadia Nour October 4, 2020
Himilo – Uwe Brutzer, milkiilaha foorno lagu dubo rootiga oo ku taalla bartamaha Shiinaha, ayaa shaqo abuur u sameeya dadka naafada ka ah maqalka, go’aankaas oo ay adag tahay in dadka badankii ku dhiiradaan. Samafale brutzer, ayaa isaga iyo xaaskiisa ...
Maxay dadka aragga la’ uga maqal fiican yihiin dadka kale?
Mahad Mohamed April 12, 2020
Himilo – Dadka beela aragga xilli hore ayaa leh dareen maqal oo ka wanaagsan dadka kale sida ay muujiyeen baaritaanno badan. Iyada oo sidaasi tahay, khubarada ayaa in muddo ah ka shaqeynayay inay gartaan sababta iyada oo la baarayao maskaxda. ...
Wax ka ogow saaxiibbada naafada ah ee booqday 50 magaalo!
Himilo – Waxay fuuleen buuro dhaadheer sida Himalayas iyaga oo booqday beeraha waaweyn ee Afrika islamarkaana ku damaashaaday goobaha dalxiiska ee 50 magaalo. Waa Danilo Ragona iyo Luca Bayardi oo u dhashay Talyaaniga oo ku socda kuraasta naafada balse ku ...
Mahad Mohamed September 23, 2019
Himilo- Ku dhawaad 72 Milyan oo qofood ayaa naafo ka ah maqalka caalamka oo dhan. 80% dadkaasi waxay ku nool yihiin dalalka soo koraya. Wadar ahaan, waxay adeegsadaan 300 luqadood oo ah afafka kala duwan ee tilmaanta sida laga soo ...
Sidee ayuu David oo naafo ka ah maqalka u caawiyaa dadka dhibaateysan?
Mahad Mohamed August 22, 2019
Himilo- Waa 49 jir naafo ka ah maqalka, waxa uu socod ku maraa Waddooyinka Ingiriiska habeen kasta isaga oo caawinaya dad aanan sidiisa oo kale naafo aheyn balse wajahaya dhibaatooyin kale. David Rossel ayaa ku guuleystay in uu toddobo qofood ...
Mahad Mohamed July 14, 2019
Himilo -Dhacdo aan caadi aheyn balse lagu tijaabinayo bulshada ayay ahayd markii duqa magaalo ku taalla Maksiko uu iska dhigay qof naafo ah oo u baahan kaalmo si uu u tijaabiyo sida ay bulshada ula dhaqmayso. Markii cabasho badan uga ...